ထုပ်ပိုးသည့်စက်၏လေးဘက်ခြမ်းထုပ်ပိုးစက်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံ - တရုတ်တံဆိပ်ခတ်သည့်စက်ယန္တရားစက်ဝိုင်းထုတ်လုပ်သူများ
အပြည့်အဝအလိုအလျောက်အရက် Swab Prep Pad ထုပ်ပိုးစက်
RRW-250G အလိုအလျောက်ချိန်ညှိနိုင်သောလေးမျက်နှာစိုစွတ်သော Wipe ထုပ်ပိုးစက်အသုံးပြုခြင်း - စက် RRW-250G သည်သန့်ရှင်းသောစိုစွတ်သောသုတ်များနှင့်စိုစွတ်သောသုတ်ခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုစိုစွတ်သောသုတ်များကိုအလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသောထုပ်ပိုးသည့်အရွယ်အစားများနှင့်ကိုက်ညီရန်ချိန်ညှိနိုင်သည်၊ စက်တစ်ခုတည်းပေါ်တွင်စိုစွတ်သောသုတ်ဆေးအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်သော OEM နှင့် ODM စက်ရုံအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ အင်္ဂါရပ်များ: ခေတ်မီချိန်ညှိမှိုဒီဇိုင်း, ကွဲပြားခြားနားသောထုပ်ပိုးအတိုင်းအတာများအတွက်စက်တစက်။ လေးဘက်တံဆိပ်ခတ် ...
SB800W လေးဘက်ခြမ်းအလိုအလျှောက်ထုပ်ပိုးစက်1တံဆိပ်ခတ်။ ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ် ၂။ စက်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်မိတ်ဆက်စကား ၃။ လျှောက်လွှာနယ်ပယ် - ဤပုံစံသည်အမြန်ဆုံးလေးစွန်းအဆုံးတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုးခြင်းစက်ဖြစ်ပြီးအကောင်းဆုံးအဆင့်မြင့်လေးအစွန်းတံဆိပ်ခတ်ထုပ်ပိုးခြင်း၊ အလိုအလျောက်မြင့်မားသောဒီဂရီ၊ အမှားအချက်ပြမှုသည်ရိုးရှင်း၏လက္ခဏာများနှင့်အညီ စစ်ဆင်ရေး! ဤစက်သည်အဓိကအားဖြင့်နွေးထွေးသော Pad၊ Infusion Heater၊ Plaster၊ ၄ ...
Sb800W အအေးခံ Gel Pad Horizontal Automatic Packing Machine
အလျားလိုက်နှာခေါင်းအလွှာအလိုအလျောက်ထုပ်ပိုးခြင်း / ထုပ်ပိုးခြင်းစက်
Gel Sheet ကိုအအေးခံရန်လေးဘက်ခြမ်းအလိုအလျှောက်ထုပ်ပိုးစက်
အပြည့်အဝအလိုအလျောက်စိုစွတ်သော Wipe / အရက် Prep Pads ထုပ်ပိုးစက်
SB800W လေးဘက်ခြမ်းအလိုအလျှောက်ထုပ်ပိုးစက် ၁။ ထုတ်ကုန်ပုံ ၂။ စက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်မိတ်ဆက်စကား ၃။ လျှောက်လွှာ၏အတိုင်းအတာ - ဤပုံစံသည်အမြန်ဆုံးလေးစွန်းတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုးခြင်းစက်ဖြစ်သည်။ ရိုးရှင်းသောစစ်ဆင်ရေး၏ဝိသေသလက္ခဏာများအရသိရသည်အမှားနှိုးစက်! ဤစက်သည်အဓိကအားဖြင့်ပူနွေးသောဒြပ်ထု၊ ပြုတ်ရည်အပူပေးစက်၊
SB800W လေးဘက်ခြမ်းအလိုအလျှောက်ထုပ်ပိုးစက်1တံဆိပ်ခတ်။ ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ် ၂။ လျှောက်လွှာ၏အတိုင်းအတာ - ဤပုံစံသည်အမြန်ဆုံးလေးကွိမ်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုးခြင်းစက်ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးအဆင့်မြင့်လေးအစွန်းတံဆိပ်ခတ်ထုပ်ပိုးမှု၊ အလိုအလျောက်မြင့်မားသောဒီဂရီ၊ အမှားနှိုးစက်များကိုရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှု၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများအရသိရသည်။ ဤစက်သည်အဓိကအားဖြင့်နွေးထွေးသော Pad၊ Infusion Heater၊ Plaster၊ ၃။ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လက္ခဏာများ SB800 သည် ...
Infusion Heater အတွက်အပြည့်အဝအလိုအလျောက်လေးဘက်ခြမ်းတံဆိပ်ခတ်စက်
SB800W လေးဘက်ခြမ်းအလိုအလျှောက်ထုပ်ပိုးစက်1တံဆိပ်ခတ်။ ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ် ၂။ စက်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်မိတ်ဆက်စကား ၃။ လျှောက်လွှာနယ်ပယ် - ဤပုံစံသည်အမြန်ဆုံးလေးစွန်းအဆုံးတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုးခြင်းစက်ဖြစ်ပြီးအကောင်းဆုံးအဆင့်မြင့်လေးအစွန်းတံဆိပ်ခတ်ထုပ်ပိုးခြင်း၊ အလိုအလျောက်မြင့်မားသောဒီဂရီ၊ အမှားအချက်ပြမှုသည်ရိုးရှင်း၏လက္ခဏာများနှင့်အညီ စစ်ဆင်ရေး! ဤစက်သည်အဓိကအားဖြင့်နွေးထွေးသော Pad၊ Infusion Heater၊ Plaster၊ 4. စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် C ...
ခွဲစိတ်မှုအ ၀ တ်အထည်များ၊
SB800W လေးဘက်ခြမ်းအလိုအလျှောက်ထုပ်ပိုးစက်1တံဆိပ်ခတ်။ ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်: စက်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များစက်၏အားသာချက် ၂။ အသုံးပြုမှုနယ်ပယ် - ဤပုံစံသည်အမြန်ဆုံးလေးစွန်းအဆုံးတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုးခြင်းစက်ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးအဆင့်မြင့်လေးအစွန်းတံဆိပ်ခတ်ထုပ်ပိုးခြင်း၊ အလိုအလျောက်မြင့်မားသောဒီဂရီ၊ အမှားနှိုးစက်သည်ရိုးရှင်းသောလုပ်ဆောင်မှု၏လက္ခဏာများအရ! ဤစက်သည်အဓိကအားဖြင့်နွေးထွေးသော Pad၊ Infusion Heater၊ Plaster၊ ၃ ။
Infusion Heater အတွက်အလိုအလျောက်လေးဖက်မြင်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်ထုပ်ခြင်းစက်